Itoobiya oo dhawr Xafiis ka Furanaysa Muqdisho – Rasaasa News
Itoobiya oo dhawr Xafiis ka Furanaysa Muqdisho
Moqdishu, Feb 19, 2014 – Sida ay qortay warbaahinta ka soo baxda dalka Somaliya, ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay xafiisyo dhawr ah ka furan doonto magaalada Muqdishu ee xarunta dalka Somaliya.
Xafiisyada ilaa iyo hada la shaaciyey waxaa ka mid ah xafiiska ay leedahay shirkada dayuuradaha Itoobiya [Ethiopian airlines], waxaa kale oo la sheegay in ay kuliyad waxbarsho ay ka furnayso Muqdishu Jaamacada Adamas [Adams University].
Heshiiyadan maal galineed ayaa la kala saxiixday ka dib kolkii wafti balaadhan oo uu hogaaminayey raysal wasaaraha Somaliya tageen magaalada Addis Ababa.
Ethiopian Airline, ayaa duulimaadyo joogta ah ka bilaabi doonta magaalada Muqdishu, in kasta oo aan la shaacin kolka uu bilaamayo duulimaadkeedu. Arintan ayaa noqonaysa xidhiidhkii dulimaad ee abid dhex labada dal, marka laga reebo xeerarka caalamiga ee duulimaadyada hawada.
Koliyada Adams, oo ah kuliyad gaar loo leeyahay, waxay laamo ku leedahay dalka Itoobiya badankiisa iyo Ismaamulka Somaliland, laakiin wax laan ah kuma laha Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI].
Arintan maal gashiga Itoobiya ee Muqdishu Somaliya, ayaa ah talaabadii ugu horaysay ee xidhiidhka isdhexgalka Itoobiya ay ka rabto Somaliya, in kasta oo dalka Somaliya ay sanooyin badan joogaan ciidamo Itobiyan ah oo ayna raali ka ahayn shacabka Somaliya. Arintan ayaa hordhac u ah isdhexgal balaadhan oo dhexmara labada dal, saamayntiisuna ay keeni doonto wax badan oo aan haatan laga hordhici karin.
Finland: Jaaliyad Taageertay Madaxwyne Cabdi